यस्ता चार युवतीसँग कहिलै नगर्नुहोस् विहे, कारण यस्तो - Sudur Khabar
यस्ता चार युवतीसँग कहिलै नगर्नुहोस् विहे, कारण यस्तो
एजेन्सी ।विवाह हामी सबैको जीवनको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय हो । त्यसैले विहेको निर्णय गर्दा निकै नै सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । यदी तपाई पनि विवाह गर्न चाहानु हुन्छ र तपाईको आमा बुबाले केटी खोजीरहनु भएको छ भने केही कुराहरुको ध्यान अवश्य राख्नुहोला ।
एक अध्ययको अनुसार तपाईको सम्बन्ध लामो समयसम्को लागि हुन्छ या चाँडै नै छुट्छ भन्नेकुराको अक्कल तपाईले पहिल्यै लगाउन सक्नुहुन्छ । केटीको केही बानीबेहोरा हेरेर तपाई यसको अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ । पढ्नुहोस् यस्ता चार युवती जोसँग विहे गर्दा तपाईको दाम्पत्य जीवन सुखमय नहुन सक्छ ।
१. केटी नातेदारमा पर्छिन् भने
तपाई कोही पनि यस्ता केटीसँग बिहे नगर्नुहोस् जो तपाईको नातोदारमा पर्छिन् । पछि गएर यस्तो सम्बन्धमा धेरै प्रकारको झमेला बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । गोत्र एउटै भयो भने पनि पछि गएर समस्या हुनसक्छ ।
२ केटीको कोही बबाल गर्नेे खालको साथी छ भने
आजकालको जमानामा विवाह अगाडी कोही केटीकोे साथी या केटा साथी हुनु कुनै नौलो कुरा होइन तर केटीको कोही केटा साथी छ र उ बबाली खालको छ भने उसले विवाहको पछी पनि हैरान बनाउन सक्छ । त्यसैले विहे अघि केटीको यस्तो खालको साथी छ कि छैन बुझ्नुहोस् ।
३. झगडा गर्ने खालको
यस्तो केटीसँग पनि बच्नुहोस् जो हरेक कुरामा गाली गर्न र झगडा गर्न तम्सिहाल्ने खालका हन्छन् । यसले गर्दा घरको वातावरण खराब हुनसक्छ र घरमा कलह बढ्न सक्छ ।
४.अबेरसम्म सुत्ने केटी
जो केटी अबेरसम्म सुत्छन् उनीहरुलाई कम जिम्मेवार मानिन्छ । यस्तोमा तपाई उनलाई घरको पुरै जिम्मा दिन सक्नुहुन्न ।